Susa Isimo Sokuvinjelwa Kwabasebenzi noma Abokufika Kwamanye Amazwe e-UAE - Law Firms Dubai
Susa Isimo Sokuvinjezelwa Kwezabasebenzi noma Esifudukayo e-UAE
Izwe lase-United Arab Emirates libeka ukuhleleka nezokuphepha phezu kwezinyawo. Bayazazisa lezi zinto ezimbili kuze kube yilapho zonke izici zilawulwa ngemibandela yezomthetho yokuqondisa abahlali ekuthobeleni kukahulumeni nokuphatha kahle konke abakudingayo futhi abafuna ukukwenza e-UAE. Kunemibandela emibili iningi labantu evame ukungayi kuyo lapho ise-UAE - ukuvinjelwa kwabasebenzi nokuvinjelwa kwabokufika.
ukuvinjelwa kwabasebenzi kanye nokuvinjelwa kwabokufika
Yini ukuvinjwa kwabasebenzi e-UAE?
E-UAE, ukuvinjwa kwabasebenzi kuyinto evamile emhlabeni wezisebenzi nabaqashi ngoba yibona ababandakanyeka kulesi simo. Isisebenzi singathola ukuvinjwa kwabasebenzi uma beshiya inkampani abasebenza kuyo noma beqeda inkontileka yabo elinganiselwe ngaphandle kokuqeda isikhathi esibekiwe lapho.
Isigaba 121 kuMthetho Wezabasebenzi wase-UAE
Abasebenzi abasenkontileka yeminyaka emi-2 yokusebenza, okuyisikhathi esivamile ezinkontilekeni ezinqunyelwe, abavunyelwe ukushiya inkampani yabo ngaphandle kokuthi izizathu zomsebenzi zinesizathu esuselwa ekuhlinzekweni okukhonjiswe ku-Article 121 kuMthetho Wezabasebenzi wase-UAE.
Kuyini ukuvinjwa kokufuduka e-UAE?
Kuvinjelwe imingcele kulabo bantu abenze okuphambene nemithetho ye-UAE. Lapho umuntu enalolu hlobo lokuvinjelwa, ngeke akwazi ukungena ezweni futhi abe ne-visa yokuhlala lapho. Kusho ukuthi abachaphazeli abanokuvinjwa kokufuduka abakwazi ukusebenza futhi bahlale e-UAE.
UkuSuswa Kwesimo Sabasebenzi e-UAE
Kunezindlela ezimbalwa zabasebenzi zokususa isimo sabo sokuvinjelwa kwabasebenzi e-UAE. Akukhathalekile ukuthi umqashi ucelile noma waqhamuka eMnyangweni Wezabasebenzi uqobo ngoba kunethemba lokuthi umuntu akumele alinde izinyanga eziyi-6 kuye kwelezi-1 engasebenzi ezweni engena futhi ephuma futhi ephuma thola ushintsho lwe-visa.
Fakani amadokhumenti adingekayo kuMnyango Wezabasebenzi - Uma ukuvinjelwa kwabasebenzi nisuke nivela kulo Mnyango kahulumeni uqobo, ningabheka inkampani enikezela i-AED 5,000 njengomholo noma phezulu. Ungacela inkampani ukuthi ikunikeze incwadi ongayinikeza uMnyango Wezabasebenzi.
Hlela izindaba nomqashi wakho - Uma ukuvinjelwa kwakho kwabasebenzi kuqhamuka kumqashi wakho, indlela engcono yokukususa noma isuswe wukukhuluma nomqashi wakho futhi ubacele ukuba basuse ukuvinjelwa kwabasebenzi.
Ukukhishwa Kwesimo Sokufika Kwabantu Abangena Kwamanye Amazwe e-UAE
Uma amacala ayefakwa kumuntu futhi kwafakazelwa ukuthi unecala lawo, kunethuba elincane lokuthi ukuvinjwa kwabokufika kungasuswa noma kususwe.
Kunezimo lapho kuvinjelwa khona abafuduki e-UAE kumuntu ongazange abeke ngisho unyawo ku-UAE. Kuyisimo sokwenza iphutha elilula. Lokhu kungaphakanyiswa ngokusebenza nommeli ezweni ozokwethula incwadi evela kuwe kanye neminye imibhalo esekelayo ephathelene nesimo sakho.
Endabeni yamasheke asenkingeni noma obunye ubugebengu bezezimali, ukuvinjwa kwabokufika kungasuswa ngokuveza ubufakazi bokuthi lolu daba luxazululiwe.
Ukuhamba Ban Iseluleki
Ukuvinjwa kwecala lobugebengu kuyaqhubeka kuze kube isikhathi sokuphenya, ukuqulwa kwecala kanye nesinqumo secala lobugebengu.